Ungayilungisa kanjani ukwahlukana zip ifayela? - DataNumen
Ukulungisa uqhekeko zip file (cabanga ukuthi igama lefayela lingu- 'mysplit.zip'), sicela wenze lokhu okulandelayo:
1. Thwebula DataNumen File Splitter bese uyifaka kukhompyutha yakho.
3. Chofoza inkinobho "Joyina".
4. Engxoxweni ethi "Joyina", khetha wonke amafayela ahlukanisiwe bese uwafaka ohlwini lwamafayela awumthombo.
5. Qiniseka ukuthi ukuhleleka kwezingxenye kuhlu kuyefana nokuhleleka kwazo kwasekuqaleni, okungukuthi, i-mysplit.z01 ingeyokuqala futhi i-mysplit.z1 ingeyesibili, njll ne-mysplit.zip owokugcina.
Sebenzisa inkinobho ethi “Nyukela Phezulu” ne- “Hambisa Phansi” ukulungisa i-oda labo uma kunesidingo. Uma ingxenye eyodwa ilahlekile noma yonakele, ungavele ungayinaki, kepha usadinga ukugcina i-oda labo. Isibonelo, uma ingxenye 2 ingabanjwanga, vele uqiniseke ukuthi izingxenye ezisohlwini yi- mysplit.z01, mysplit.z03,…, mysplit.zip.
6. Setha igama lefayela oya kulo, njenge-mysplit_merged.zip
7. Chofoza u- “Start Joyina ”ukujoyina izingxenye kufayela lapho uya khona mysplit_merged.zip.
8. Ngemuva kokuthi inqubo yokujoyina isiqediwe, unga start DataNumen Zip Repair futhi ulungise i-mysplit_merged.zip njengokujwayelekile zip ifayela. Ifayela elihleliwe lizoqukatha idatha yazo zonke izingxenye zokuhlukaniswa Zip ifayela. Ungayivula ngokuthandwa Zip Izinsiza, ezinjenge-WinZip, PhumelelaRAR, Njll
Ujoyine, zip ifayela